राजाले आर्जन गरेको मुलक हो ! सांसद पद त्यागे अब राजतन्त्रको लागि संघर्ष गर्छु : भिम रावल ( भिडियो )
श्री ५ महेन्द्र शाह र श्री ५ बिरेन्द्र शाह वंश मारिए किन र मदन भण्डारी र जीवराज आस्रित मारिए किन ? यी सबै घटनाक्रम हरुलाई राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नजीकबाट नियालेर मनन गर्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने हो । राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले मुलुक संग विश्वासघात र मुलुकको अहितमा काम गरेपनि भएको छ विश्वासघात गर्नेहरुको पछि नै नागरिकहरु लागेका छन र जयजयकार गरेका छन ।
ताली दुई हातले बज्छ एक हातले बज्दैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । यसकारण राजा ज्ञानेन्द्र शाह परिवार मात्र देशभक्त भएर संभव छ ?राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ताली दुई हातले बज्छ एक हातले बज्दैन भन्ने कुरा बुझ्न सक्नु भएन ।
२०७८ श्रावण ७, बिहीबार १०:४२0Minutes 125 Views